Abakhiqizi bebhodlela le-Glass abalulekile, abahlinzeki - Ifektri ye-Glass Ebalulekile yamafutha e-Glass
Ibhodlela Lokuhlanza Ingilazi / Jar
Ingilazi Pump Bottle
Ingilazi Spray Bottle
Ingilazi Yezimonyo / Jar
Ingilazi Cream Jar
Ingilazi Ibhodlela lamafutha elibalulekile
Ingilazi Perfume Bottle
Ingilazi Nail Polish Bottle
Ingilazi Lotion Bottle
Ingilazi Yokudla Yokugcina Jar / Ibhodlela
Glass Isiphuzo Bottle / Jar
Ingilazi yotshwala / Jar
200ml Amber Glass Pharmaceutical Bottle, Iphilisi Jar wi ...
500ml Amber ingilazi ubhiya ibhodlela nge jika flip phezulu
16oz 500ml umlomo umlomo ingilazi makhi imbiza p ezinemibala ...
5oz woozy hot sauce ingilazi ibhodlela nge cap futhi ...
Custom ingilazi amakha ibhodlela isethi umphakeli China
I-3ML SILVER COLOR I-CYLINDRICAL SHAPED GLASS YENYONGA ENGENALUTHO ...
100ml engenalutho Refillable Frosted Glass Pump Amabhodlela Cont ...
30ml Amber ingilazi kubalulekile uwoyela ibhodlela nge ukuphazamisa ev ...
30ml 60ml 120ml iqonde emaceleni amber ingilazi ubuso okhilimu ...
8oz 250ml amber ingilazi ibhodlela nge black st engagqwali ...
8oz 250ml Amber Boston round ingilazi Isifutho amabhodlela Wit ...
16oz 500ml ecacile Boston round ingilazi inhlamvu fafaza bo ...
30ml Amber ingilazi ibhodlela kawoyela ezibalulekile nge kuphazamise isivalo sobala
Ibhodlela le-amber le-30ml elinesivalo esine-tamper-proof liyingxenye yochungechunge lwethu lwamabhodlela. Yenziwe ngengilazi yegolide emsulwa, kuhle ukuthi uhlele ukusebenzisa la mabhodlela kabusha. Futhi kufaneleka kakhulu ukuhlinzeka ngemihlobiso esezingeni eliphakeme yemikhiqizo yakho. I-Amber futhi inikela ngokuvikelwa okuphezulu kakhulu kwe-UV kuwo wonke amabhodlela ethu okwehlisa amibalabala, okwenza kube lula ukubamba imikhiqizo nezixazululo ezithinta izithombe.
15ml sula ibhodlela likawoyela elibalulekile nge-black aluminium dropper pipette
Indlela elula nehlanzekile yokuhambisa ikhambi kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye ngaphandle kokulahlwa. Uma ihlanganiswe nebhodlela lethu lokwehlisa elingu-15ml eline-glass pipette, linganikeza inketho yokupakisha ephephile nethembekile ye-aromatherapy yakho namafutha abalulekile. Ibhodlela elisobala lingelethu lochungechunge lwethu lwamabhodlela, ngakho-ke sicela uqiniseke ukuthi ibhodlela olitholayo lizoba sezingeni eliphakeme futhi lihlale isikhathi eside.
I-100ml cobalt ingilazi eluhlaza okwesibhakabhaka ibhodlela elibalulekile lamafutha nge-CR proof lid
Sebenzisa amabhodlela anezingilazi zamapayipi engilazi ukugcina uhla lwemikhiqizo nezixazululo, kufaka phakathi owoyela abalulekile namafutha othwala, amakha, ukwelashwa kwezimbali zeBach, izixazululo zezempilo, nokuningi. Ingilazi eluhlaza okwesibhakabhaka iyindlela elula nephumelelayo yokuhlinzeka ngemikhiqizo yakho ngokubukeka okuseqophelweni eliphezulu, ngaleyo ndlela kuqinisekiswe ukuthi wena nemikhiqizo yakho niphambi komncintiswano ngenkathi niheha ukunaka kwamakhasimende angaba khona.
50ml ecacile ingilazi ibhodlela ngegolide aluminium spray futha
Vikela, ubonise futhi usakaze iphunga lakho namakha akho emabhodleleni engilazi e-Easypack. Le bhodlela le-50ml ecacile lokufafaza ingilazi lingelethu lochungechunge lwethu futhi ilungele kakhulu imikhiqizo yezempilo neyemithi. Ingilazi ebonakalayo ingathuthukisa izinga lomkhiqizo nokubonakala. Kukufanele kakhulu wena namakhasimende akho ukuhlukanisa ngokushesha ukunambitheka / iphunga elihlukahlukene. Uhlangothi oluqondile lwebhodlela lwenza kube lula ukungeza ukuphrinta kwakho kwelebula / kwesikrini.
20ml ingilazi eluhlaza ibhodlela lamafutha elibalulekile elinesivalo sokwehlisa isidali
Uchungechunge lwethu lwamabhodlela we-glass dropper luzoqinisekisa ukuvikeleka okuhle kwemikhiqizo yakho, ukubukeka okuhle futhi kulungele amakhasimende akho. Le bhodlela lokwehlisa ingilazi engu-20ml enokhiye wokwehlisa alibukeki limangalisa nje kuphela, kepha futhi linikeza nendlela ekahle yokukhipha umkhiqizo ngokunembile. Lokhu kungenxa yokufakwa okwehlisayo okuhamba kancane kukapisi, okuvumela ukuthi umkhiqizo wakho ukhishwe ngendlela yamaconsi. Ilungele kakhulu owoyela ababizayo ababizayo nezinhlanganisela ze-aromatherapy.
Ngaphansi komnotho oluhlaza, ukufakwa kwengilazi ...
Izizathu ukuthandwa soda lime g ...
Izici eziningana ezibalulekile ezithinta ikhwalithi ...
Amabhodlela e-Glass Pump Amafutha Abalulekile, Ingilazi Pump Amabhodlela Shampoo, Amabhodlela e-Glass Lotion Nge Pump, Glass Bottle Nge Spray Pump, Glass Bottle Nge Pump Idivaysi ekhipha, Sula Amabhodlela e-Glass Pump,